Iloft enembonakalo yolwandle emangalisayo! I-Air cond 8andar - I-Airbnb
Iloft enembonakalo yolwandle emangalisayo! I-Air cond 8andar
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
Yonke i-loft elungisiweyo yaza yabona ulwandle simahla, kummandla odumileyo wePorchat Island. Zingenele ngokwakho ngokutshixa nge-elektroniki, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, izixhobo kunye nekhitshi elipheleleyo. I-intanethi ye-500 mega I-NET ekhawulezayo, i-cable TV kunye ne-Smart TV. Umatshini wokwenza ikofu kunye neziselo ezininzi zeDolce Gusto. Isitovu, ifriji enefriji, indawo yokoja yombane nomatshini wokwenza isanti. Ibhedi kunye nelinen yokuhlamba kunye nomatshini wokomisa iinwele. 220v iziseko
Kwisiqithi sasePorchat, esidume ngokubukeka nemidlalo, iLoft ikwisakhiwo esakhiwe kwaye senziwe ngabayili baseItali. Inemigangatho eyi-7 yegaraji, iBlueoon kunye neBlue Sky Condominium inokhuseleko olunemijikelo ye-24h ngosuku. Inkqubo yokubhalisa xa ufika kukuzingenela, ngaphandle kokufuna izitshixo, ukususela nge-
isitshixo sithunyelwa ngu-Airbnb, ethumela iPIN yokungena ngqo kundwendwe. Ukhuseleko kunye nobulula bokungafaki izitshixo! Iloft inebhedi enezipringi ezimbini kunye nebhedi epakishwayo enomatrasi ababini. Apha isilwanyana sakho esincinci samkelekile!
IGARAJI ikwisakhiwo segaraji phambi kwesakhiwo, esinemigangatho eyi-7. Isakhiwo segaraji sinezokhuseleko ezifumaneka imini nobusuku ibe sikhuselwe. Ingaphambi kwendawo yokungena kwisakhiwo.
Apha isilwanyana sakho sasekhaya samkelekile, ukuba nje sincinci, ngeendleko ze-R$ 50 kwisilwanyana ngasinye sasekhaya.
I-LTI yasekuhlaleni + enobuhlobo. Nayiphi na indlela yokuthanda ibalulekile!
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.83 · Izimvo eziyi-166
Ngaphantsi kwesiqithi kukho i-Praia dos Milionários kunye ne-Praia do Itaré, edume ngeendawo zaso ezithandwayo. Kwisiqithi kukho iivenkile zokutyela eziyi-2 ezintle kunye neeklabhu. Ukunyuka kwesi siqithi kusoloko kusetyenziswa imini yonke kude kube sebusuku ngabadlali abaya kuloo ndawo. Phezulu kwesi siqithi sisikhumbuzo seminyaka eyi-500 yeDiscovery yaseBrazil, esenziwe ngumzobi odumileyo we-Niemeyer.
Ndisoloko ndifumaneka apha nakuWhatsApp!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ilha Porchat